Pacman: maitiro ekutamba nhanho nhanho
Kuti utambe kite pamhepo mahara, unofanira kungoita tevera iyi rairo nhanho nhanho:
Vhura browser yako yaunofarira uye enda kunzvimbo yemutambo Emulator.online.
Ukangopinda saiti, mutambo unozoratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye iwe unogona ikozvino kutanga kusarudza iyo gadziriso yaunoda. Kana uchinge wakunda mutambo unogona kukwira kumusoro. Iko kune huwandu hwese makumi maviri nemana mazinga.
Zvino, iwe unowana mamwe anobatsira mabhatani. Unogona "Wedzera kana bvisa ruzha", Ipa bhatani"tamba"Uye tanga kutamba, unogona"Mira zvishoma"uye"Kutangazve”Panguva ipi neipi.
Anokwanisa kudya yega yega yega yega macandi pasina kudyiwa.
Mushure mekuzadza mutambo, tinya "Tangazve" kutanga patsva.
Mhedzisiro ye comecocos
Pac-Man mutambo wakasarudzika unozivikanwa kubva kumaXNUMX. Waive yakaratidzwa pasi pano mumitambo yemavhidhiyo munyika yeJapan muna Chivabvu 1980, XNUMX. Mutambo wakasvika muUS 5 mwedzi gare gare uye nekukurumidza ukasvika zviuru zana zvemakopi akatengesa mucherechedzo.
Kunze kweiyo Arcade vhezheni, Pac-Man akave akagadzirirwawo iwo XNUMX Atari. Kwemakore, mutambo wacho wakawana gumi nemaviri uye gumi nemaviri ezvinyorwa zvakagadziridzwa zvemazuvano ekunyaradza. MuBrazil, hunhu hwakazozivikanwa seHuya-Uya waivewo kubudirira.
Pamusoro pechimwe nechimwe chezvinhu zvacho, zano remutambo uyu raive rekutarisa yeyero hunhu ichidya mahwendefa mune maze. Panguva imwecheteyo, mutambi anofanira kupukunyuka kubva kune mana ma specters anoedza kumukunda.
Namco aida izwi rakasiyana kubva kumitambo yekupfura, vachibvumirana panguva iyoyo. Pakutanga, Iwatami akaziva kuti aive nekurudziro yemunhu nekuona pizza isina chidimbu.
Nekudaro, mabviro emunhu anewo mamwe maBhaibheri. Maererano naIwatami pachake, chimiro che Kite yakafemerwa nekunyorwa kweJapan kweshoko rekuti "kuchi", muromo.
Paakangogadzirwa, hunhu hwaizivikanwa se Kite. MuJapan, kupereterwa kwepuck uye pac zvakangofanana, paku. Maererano nedzidziso dzenyika, zvaizivikanwa kuti Paku aive nechido chakakura. Pamusoro peizvi, izwi rinoshanda kunge onomatopoeia kuvhura nekuvhara muromo kana uchidya.
Kune rimwe divi, iro zita Puck rinonzwika zvakanyanya kunge taco muChirungu. Saka pakaunzwa mutambo kuUS, Namco akasarudza kuidaidza kuti Pac-Man.
Kunyangwe yakatangwa kekutanga muJapan, yaive nekusvika muUS kuti yakasiya mucherechedzo pane pop tsika. Kubudirira kwemutambo kwaishamisa zvekuti mune chete makore gumi ekudhinda akaunganidza bhiriyoni emadhora, chete mumakamuri emitambo muUS.
Kwemakore gumi anotevera, kukosha kwacho kwakapetwa kaviri, kuchisvika US $ 500 bhiriyoni. Nhasi, iyo franchise yaunganidza angangoita gumi nematatu bhiriyoni pasirese. Izvi zvinoreva kuti inopfuurwa chete neVapambi veMuchadenga (pamwe nemabhiriyoni gumi nemana emadhora ekuAmerica) mune runyorwa rweanobatsira kwazvo pasi.
Kubva yekutanga vhezheni mune arcades, Pac-Man akahwina anopfuura makumi matatu akateedzana. Hunhu hunoramba huchiita kuoneka mumitambo inoenda kupfuura iyo kodzero yake. Mu Super Smash Bros, kushanda semuenzaniso, yero bhora rinogona kusarudzwa semumwe wevarwi.
Chii chinonzi Pacman?
Kite mutambo wemagetsi wakagadzirwa ne Tōru Iwatani kukambani Namco. Pakutanga yakagadzirwa yeArcade muma80, yakava imwe yemitambo yakatambwa uye inozivikanwa nhasi, ine shanduro dzazvino dzinoverengeka dzekunyaradza uye dzakateerana dzevamwe vazhinji.
Ndiwo mutambo wakapusa kwazvo: mutambi anga ari yakakomberedza musoro nemuromo iyo inovhura uye inovhara, yakaiswa mune yakapusa maze izere nemapiritsi uye maonesheni mana akamutambudza. Chinangwa chaive idya yega yega piritsi pasina kurohwa nezvipoko, pamwero unofambira mberi wekuoma kunzwisisa.
Pac-Man ndomumwe wevanonyanya kudiwa uye vanozivikanwa mavara mumavhidhiyo mutambo wekunyaradza wemaXNUMX. Uchapupu hweizvi ndiko kufarirwa kwaro kunyangwe pakati pevadiki, vasina kana kutamba mitambo yaro.
Uye kana iwe uri fan of uyu anokara mudiki yeyero hunhu, tarisa kune imwe inonakidza trivia nezve yake franchise.
Chinangwa chemutambo ndeichi idya yega yega yega yemataira emahara isina kurohwa nezvipoko. Paunenge uchirovera nepiritsi, iyo Kite inomedza uye inofanira kunyangarika kubva mumazaya. Kana mutambi achidya yega yega tile mumazee, mutambi anodarika nhanho. Kana mutambi achidya imwe neimwe yetiles mune yega uye yega yega yemahara mazes, anokunda mutambo.
Iwo ega mafambiro anodzorwa nemushandisi ndiwo kufamba uchifamba nekiyi dzinonongedzera dzakatarisa kumberi, kumeso kumashure, kuruboshwe uye kurudyi, nechinangwa chekudzivirira ma specters uye kudya mahwendefa akapararira akatenderedza labyrinth.
Kana tariki ikabonderana ne Kite anofa, nekudaro achirasikirwa nehupenyu. Mutambi ane mamwe mahupenyu maviri, iyo inoratidzwa muzasi repasi pechiso. Kana iwe ukarasikirwa nehupenyu uye ukashandisa humwe hupenyu, huwandu hwemapiritsi akasara muchikamu chinoramba husina kuchinjika kubva panguva yekufa kwe Kite, munhu wese anodzokera kune yekutanga mamiriro echikamu.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, kuzadza danho (kana mutambo), mutambi anongoda kunetseka nezve mapiritsi asara. Kana mutambi akarasikirwa nehupenyu hwavo nekurovera neanoona, ivo vanorasikirwa nemutambo.
Iko kumhanya kweiyo spectra uye iyo Kite zvakangofanana, asi, semutambo wepakutanga, mapiritsi-epamusoro anodzora iyo spectra nepesenti chinhu uye zvakarerega iyo Pacman akavadya.
Kana dzikadyiwa, iwo chete "maziso emweya" anosara, ayo anofanirwa kudzokera pakati peye labyrinth, uko kunosara kweye specter kunozove zvakare tarisa inozotambudza zvakare Pacman. Muchikamu chimwe nechimwe pane mahwendefa mana makuru. Iyo yekuvandudza inoona kuti inguva yakareba sei mahwendefa makuru anozogara.
Hwendefa rega rega rakadyiwa rakakosha mapoinzi gumi, yega yega yakadyiwa super piritsi yakakosha zana zana, uye yega yega yakadya specter inokosha mazana maviri emapoinzi Mutambo unofanirwa kugara unosvika zvikamu zviviri.
Paakagadzira mutambo, Toru Iwatani aida kukwezva vateereri vechikadzi kune mafomati ane chisimba uye mhirizhonga. Kunyangwe izvi, makamuri emitambo akaenderera achiwanzo kuve mazhinji echikadzi nzvimbo. Naizvozvo, iye anovandudza aifanirwa kugadzira imwe nyowani sarudzo.
Nekudaro, mhinduro yakadeuka zvisingatarisirwi. Kubudirira kwaPac-Man kwakakurudzira kugadzirwa kwemutambo Crazy Otto. Iine yakafanana Gameplay uye yevakadzi vhezheni yeiyo primal hunhu, mutambo wacho waive usina hukama naNamco.
Saka, Midway, uyo ane kodzero dzePac-Man muUSA, akapedzisira atenga Crazy Otto uye achiiburitsa pasi pezita Mai Pac-Man. Mutambo wakaunza hutsva senge nyowani nyowani uye nekukurumidza kumhanya.
Nguva pfupi yapfuura kubudirira mumitambo, iyo franchise yakawana traction mune mamwe midhiya. Mumakore gumi nemapfumbamwe makumi masere nemaviri, munhu wacho akahwina vhezheni yeanoteedzana akadaidzwa Pac-murume fivha. Iyo dhizaini yakaburitswa naHanna-Barbera, anotungamira echinyakare zvigadzirwa senge Flintstones neJetsons.
Pamusoro peizvi, hunhu ndiyo yaive yekutanga mhuka ye videogames. Kubva payakatanga kuoneka, yakashambadza zvigadzirwa senge zvidhori, t-shirts, mabhegi uye zvimwe zvakawanda. Yakakurumidza kuve rimwe remazita emitambo anozivikanwa kunze kwemidhiya.
Chekupedzisira, zvazvinoita papuraneti yemitambo yakadaro zvekuti kunyangwe vanyori veGTA vataura kuti mutambo wakaita Kite. Sekureva kwevagadziri, iyo miviri mitambo iri yemunhu anofambira mberi mumapoinzi pamepu (vanofamba netsoka / mapiritsi) achidzingirirwa nevadzivisi vake (mapurisa / zvipoko).
Kuvaraidza chokwadi nezvePac-Man
Mutambo wepakutanga, kubva gumi nemapfumbamwe makumi masere, ndeimwe yegumi nemana iri chikamu chekuunganidzwa kwemitambo kubva ku New York City Museum yeazvino Art.
Pac-Man ndiwo mutambo wekutanga kubatanidza zvenguva pfupi magetsi makanika pachishandiswa chinhu. Pfungwa iyi yakafemerwa nehukama hwaPopeye nesipinachi.
Mumwe nemumwe wevadzivisi mumutambo ane hunhu hwakasiyana. Izvi zvinova pachena kana tikatarisa mazita avo muchiJapanese: Tsvuku oikake (Stalker), Machibuse pink (Vandira), Kimagure bhuruu (Unstable) uye Otoboke orenji (Benzi). MuChirungu, mazita aya akaturikirwa saBlinky, Pinky, Inky, naClyde.
Kunyangwe mutambo wacho usingaperi, unogona kuva nemutambo wakakwana. Inosanganisira pedza mazana maviri nemakumi mashanu neshanu matanho pasina kurasikirwa nehupenyu uye unganidza chimwe nechimwe chinhu chiri mumutambo. Pamusoro peizvi, yega yega yega yekutarisisa inofanirwa kudyiwa nebasa rega rega rekusimudzira.
Kukudza kodzero yemutambo, Google yakanyora chinyorwa chinotamba chePac-Man pamutambo wemakumi matatu emakore.